Araka ny fampitam-baovaon’ny minisiteran’ny fiarovam-pirenena, mitohy hatrany ny ezaka ataon'ireo miaramila mpampandry tany amin'ny faritra ZRPS Alpha, Atsimo Andrefana sy ny ZRPS Bravo any Miandrivazo, Morondava, Matsiatra ambony. Omby 151, ondry 160 ary osy 105 no sarona ny 5 septambra tamina raim-pianakaviana tompon'omby efa fanta-daza fa mpanodinkodina omby halatra ao Antanimieva. Nentina avy hatrany nihazo ny toby miaramila any an-toerana moa ireo omby ireo ka atambatra amin'ireo namany efa navory ao. Ny 4 septambra kosa tao amin'ny fokontany Andolobe, tafaverina amin'ny tompony avokoa ny omby 34 nalain'ny dahalo. Izany dia noho ny fanarahan-dia nataon'ireo miaramila any an-toerana sy ny fokonolona. Mitohy hatrany ny fiaraha-miasa amin'ny zandary hanao ny fanadihadiana.